» दिउँसो अधिकतम तापक्रम बढ्दा पुसमै गर्मी !
दिउँसो अधिकतम तापक्रम बढ्दा पुसमै गर्मी !
२७ पुष २०७७, सोमबार ०८:३३
काठमाण्डौ – दुई दिनदेखि काठमाण्डौ उपत्यकामा दिउँसो गर्मी अनुभव हुन थालेको छ ।
हिजोको अधिकतम तापक्रम २३ डिग्री सेल्सियस रेकर्ड भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज बढेर २४ डिग्री सेल्सियस पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ । अबको केही दिनसम्म काठमाण्डौको तापक्रम यही हाराहारीमा रहने महाशाखाका मौसमविद् राजु प्रधानाङ्गले जानकारी दिनुभयो ।
अब बिस्तारै चिसो घट्दै जाने हुँदा तापक्रम बढ्नु सामान्य भएको मौसमविद् प्रधानाङ्गले बताउनुभयो । यस वर्षको हिउँदमा हिउँ र पानी कम पर्नु तथा अहिले वायुको बहाव अरेबियन सागर हुँदै आएकाले न्यानो महशुस भएको मौसमविद् प्रधानाङ्गको भनाइ छ ।